FÖRNUFTIG iyo YAPASI-YEMAHARA mweya wekunatsa kubva kuKEA | Gadget nhau
FÖRNUFTIG iyo YAPASI-YEMAHARA mweya inonatsa kubva IKEA
Miguel Hernandez | 17/03/2021 15:00 | General, Reviews
Vanochenesa mweya vava chigadzirwa chinodikanwa kwazvo, pane akawanda mabhureki akapinda munzvimbo yakasimba mumusika wezvigadzirwa izvi, zvisinei, yaive nyaya yenguva hombe iyo fanicha yeSweden isati yasvika kuzoratidza demokrasi chigadzirwa chakafanirwa kuvapo mudzimba zhinji.
IKEA yatanga FÖRNUFTIG, inodonhedza mutengo mweya unosuka nemasimba akakura uye mafirita akadhura kwazvo, takaiongorora zvakadzama. Gara nesu uye uone kuti nei ichi IKEA chigadzirwa chichigona kuve chakanyanya kutengesa uye kusimuka kune izvo zvinodhura zvigadzirwa.
Sedzimwe nguva, isu tasarudza kuperekedza iyi yakadzama ongororo yevhidhiyo mauchakwanisa kuona kusaburitsa kweanochenesa mweya IKEA, asi zvakanyanya, isu tichaenda kukuratidza kuti zvinoshanda sei, maitiro aunga shandura mafirita uyezve zvese zvakadzama senge nhanho yeruzha iyo yainokwanisa kugadzira. Saka Tinokurudzira kuti utarise vhidhiyo uye utore mukana wekunyorera kuchiteshi chedu, kwaticharamba tichiisa ongororo dzinonakidza kwazvo nezve zvigadzirwa zvemumba zvinozoita kuti hupenyu hwako huve nyore.
1 Dhizaini uye zvigadzirwa: Mune yechokwadi IKEA maitiro
2 Mhando dzakasiyana dzesefa uye kugona kwekuchenesa
3 Mazuva ese mashandisiro uye ruzha mazinga
Dhizaini uye zvigadzirwa: Mune yechokwadi IKEA maitiro
Kana paine chinoshanda usachibata, uye icho chinhu icho IKEA yakajeka chaizvo nezve dhizaini uye zvigadzirwa zve izvo zvigadzirwa izvo zvisina kungoenderana nefenicha. Yese imba yayo otomatiki, kurira kana gadaget zvigadzirwa zvinovimba neepurasitiki imwe chete, iwo iwo masuruji uye akafanana dhizaini, uye izvo zvinotibatsira kuti tigadzire kubatana uye hunhu nharaunda. sezvaungaona mukutarisa kwedu kwemarambi uye masipika ayo IKEA akagadzira naSonos. Mune ino kesi ivo vane mvumo yangu, asi padiki padanho rekushamisika.
Vipimo: X X 45 31 11 masendimita
Isu tinobheja pane chena kana nhema nhema epurasitiki kuti ienderane nemutengi uye grey machira epamberi pani, zviri nyore kubvisa. Zvese izvi zvinhu zvinopa kuwedzera kwekureruka, kuramba uye kureruka kune chigadzirwa, kure nekutarisa kwekunzwa shoma, chavari kuda kugadzirisa mutengo uye nekugara kwayo. Kumashure isu tine zvitsigiso, uye iyo IKEA mhepo yekuchenesa inogona kuiswa zvese kumusoro uye yakatwasuka, yakasungirirwa kumadziro kana kutakurika zvachose pamwe chete nemubato wayo wenylon uye rutsigiro rwetsoka rwakanyatso kuverengerwa mubhokisi uye kuenzanisa ruvara rwechigadzirwa.
Bhokisi rine kadhibhodhi rinoshanda se mamaki ekusungira iyo kumadziro (usarase kure)
Ose maviri kickstand (akaisirwa) uye iyo nylon mubato inogadziriswa
Ose maviri mubato wenylon uye rutsoka rutsoka rwakagadzirwa zvizere Inobviswa, iyo inofambisa shanduko yezano maererano neshongedzo. Mumashure tichava neyakafambiswa tambo tambo iyo ichatibvumidza kuti tipe nzvimbo dzakasiyana pasina kukosha kwekuona tambo dzakarembera pamadziro. Iyi tambo, kune rimwe divi, ine rupo uye ine yakatarwa uye zvine simba simba adapter yemuchina.
Mhando dzakasiyana dzesefa uye kugona kwekuchenesa
Mune ino kesi iyo yekunatsa mweya FÖRNUTFIG kubva IKEA Iyo inogona kushandiswa neayo maviri mafirita panguva imwe chete, kana kungoita neiyo huru firita. Izvi zvinodaro nekuti imwe yadzo inosanganisirwa mupakeji uye imwe yacho ichatengwa sesarudzo kana tichida. Aya ndiwo mafirita maviri anoumba IKEA mhepo yekuchenesa
HEPA 12 firita: Tine firita inosanganisirwa firita yehukuru hwakakura, firita iyi inobata 99,95% yezvimedu zvinofambiswa nemhepo zvakaita sepoleni, ine hunyanzvi kusvika kuna PM2,5, zvinoreva kuti inochengeta zvidimbu zvakakura kupfuura 2,5 nanometer. Izvi zvichatengwa zvakasiyana kubva ku5 euros yakananga kuKEAzvisinei, chinhu chinosanganisirwa mupakeji.
Sefa yegesi: Iyi firita yakanyanya uye yakagadzirirwa kudzikisira kuvepo kwehwema neutsi, asi nechinangwa chekugadzira kunzwa kwehutsanana uye kuchena mumhepo, asi pasina chengetedzo yezvimedu. Iyi firita ichagara iine "yekuwedzera" hunhu, ndosaka ichitengeswa zvakasiyana. kubva ku10 euros zvakare muzvitoro zveKEA. Izvi zvinonatsa mweya nekubvisa zvakasiyana gaseous zvinosvibisa senge VOCs uye formaldehyde.
Iyo chishandiso ichashanda pane zvinodiwa, ndiko kuti, isu tichafanirwa kuitisa. Iyo haina chero yekuongorora mweya kana yambiro inopfuura iyo LED chiratidzo cheiyo yekuchenesa chinzvimbo chesefa uye bhatani reRETET yaro seri kwevhavha yekutanga. Kana tangove nezvakajeka izvo, tinowana matatu mazinga eKuchenesa kuburikidza neiyo roulette kumusoro. Muchiitiko chekumisikidza rakanyanya simba, iyo yemahara mweya emission mwero wezvikamu (CADR kukosha) i130 m3 / h.
Mazuva ese mashandisiro uye ruzha mazinga
Iwo mazinga eruzha anoenderana zvakananga padanho remagetsi rakapihwa, padanho repasi ruzha rwacho runenge rwusingabatike (runogona kuonekwa muvhidhiyo iri pamusoro), zvisinei, ruzha rwehuremu hwesimba rakanyanya rakaenzana neiya yechinyakare fan pane yakaderera simba. Naizvozvo, hushoma huwandu hunobvumidza hwakajairwa hupenyu hwezuva nezuva uye kunyange kurara nawo hwakaitwa, kwete padanho repamusoro, iro rinoratidzika kunge rakagadzirirwa mamiriro ehutsi kana mukume wakanyanya. Izvi zvinobatsira kusimudzira hutano uye hupenyu hwezuva nezuva hwevanhu vane allergies.
Mukushandisa kwezuva nezuva uyu munatsi anogadzira kunwiwa kwemazuva ese pakati pe2,5 ne19 watts, diki kwazvo, saka hatifanire kunetseka nezve chikamu ichi. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti yekubatanidza tambo ine rupo chaizvo uye mubato waita kuti zvive nyore kwazvo kwandiri mumiedzo yangu kuutakura kuburikidza nemakamuri akasiyana. Kushandiswa kwemaminetsi makumi mana nemashanu mune imwe imba ine mafirita matatu kunobvisa zvachose hwema hwakaipa hwemangwanani, Saizvozvowo, kuvhiya kwakafanana mukicheni kwakabvisa zvachose hwema kubva muchikafu. Nekudaro, kuti uzive zvakadzama mhedzisiro yayo zvine chekuita nemukume nezvimwe zvidimbu zvinofanirwa kuongorora mweya munguva chaiyo, uye ndiyo chaiyo kiyi yemutengo wayo wakagadziriswa.
Hapana mubvunzo IKEA dzokera ku kuputika musika weiyo fashoni gadget yemumba, ino yekunatsa mweya inozviratidza yakaringana uye inoratidza ine hushamwari dhizaini, ichiigadzira kwema 59 euros chete inova yekutanga sarudzo yevatengi vanogara veSweden firm.
Yakatumirwa pa: 17 March we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 14 March we2021
Zvinhu zvinozivikanwa uye dhizaini
Sefa zvakasiyana uye nekuchenesa kushanda
Pasina air quality analyzer
Iyo yekubatanidza tambo ndeyekuridzi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » FÖRNUFTIG iyo YAPASI-YEMAHARA mweya inonatsa kubva IKEA
Huawei inotangisa iyo Watch Fit Yakashongedzwa edition, iyo yakachipa kwazvo premium smartwatch
Izvo zvakanakisa tech zvipo zvezuva rababa